FAKAFAKA: kolontsaina mivelatra… | NewsMada
FAKAFAKA: kolontsaina mivelatra…
Par Taratra sur 22/01/2019
Somary efa hita taratra ihany io fivelarana io atsy ho atsy. Mila fitandremana fatratra anefa satria tsy mitovy velively ny fivelarana sy ny fanarahana am-bokony ary ny fanivaivana ny an’ny tena. Samy efa mitranga avokoa mantsy ireo kanefa ny fivelarana manomboka eto, toa hisokatra be sy hidanadana ka sao vao mainka hiitatra ny teo aloha. Anisan’izany ny fidedahana amin’ny kolontsain’ny hafa. Ny fiheveran-tena ho manana ny lesoka manoloana ny zavakanton’ny sasany, sns.
… Na izany aza, tsy sanatria ka biby fampitahorana ny fivelarana fa lalana tsy maintsy izorana ihany. Anisan’ny fepetra tsy maintsy hajaina anefa ireto raha tiana ny ho tafavoaka ao anatin’ity ambara ho fivelarana ity. Mila mahay miaina miaraka amin’ny kolontsainy sy ny zavakantony ny Malagasy. Mahay mampifanaraka izany ihany koa amin’ny vanim-potoana diavina sy lalovana.
… Tsy ampy intsony ny fiarovana fotsiny ny maha izy ny kolontsaina (fomba, tantara…) sy ny zavakanton’ny tena fa tsy maintsy ampahafantarina ny taranaka aty aoriana ny antony hanaovana izany. Anisan’ireny, ohatra, ny fisian’ny hasina, ny fomban-tany, ny fombam-pianakaviana, ny antom-pisian’ireo fady samihafa, sns. Nanana ny antony avokoa izy ireny fa tsy sanatria nataotao fahatany.
Raha tanteraka ireo (miaina miaraka amin’ny kolontsain’ny tena, milaza ny antony hanajana azy ireny, mahay mampifanaraka izany amin’ny vanim-potoana iainana), azo antoka fa tsy hatahotra ny fanatontoloana ny Malagasy sy ny kolontsainy.